Maxaa ka jira in la soo koobayo deegaan doorashada dalka? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in la soo koobayo deegaan doorashada dalka?
Maxaa ka jira in la soo koobayo deegaan doorashada dalka?
Ra’iisal Wasaare Rooble iyo masuuliyiinta kale ayaa qalinka ku duugay shan qodob oo heshiiskaasi muhiim u ahaa, kuwaa oo kala ah tubta xalinta cabashada la xiriirta Guddiyada Doorashooyinka ee Heer Federaal & Heer Dowlad Goboleed, hannaanka xalinta khilaafaadka Gobolka Gedo, xal u helidda Guddiga Maamulka Doorashada ee Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, qoondada haweenka iyo in lixdan cisho doorasho lagu qabto.
Madaxdu waxay garwaaqsan yihiin inaanay lixdan cisho ku qabsoomi karin Doorashooyinka Baarlamaanka & midda Madaxtooyada, waxayna mar kale qorsheynayaan inay jiheeyan doorashooyinka dalka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ay u badan tahay in madaxdu isu raaci doonaan in lix goob doorasho lagu soo koobo doorashooyinka dalka, haddii muddada shirka uu socdo aanay arrimo kale soo bixin.
“Dabcan haddii khasab looga dhigo inay lixdan maalmood doorashada ku qabtaan, ayagana xaq waxay u leeyihiin inay yiraahdaan hala soo koobo deegaan doorashada, ayadoo waqtiga yar ee harsan la eegayo.” Ayuu yiri Sarkaal ka tirsan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa mar sii horeysay sheegay inaanan lixdan cisho lagu qaban karin doorashooyinka.
Xildhibaanka ayaa yiri “Ma muuqato inay hirgelayso, arrintaasina waa arrin lugooyo ku ah dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed, oo dowladnimadii baa khatar ku jirto. Waxaa laga leexday jidkii saxda ahaa oo ahaa in doorasho qof & coda iyo xisbiyo la aado, iyadoo laga baqayo haddii arrintaasi ay dhacdo, ragga kan hadda dhowrka ahoo ee howshaan wada ee Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada madaxda ka ah in nin walba wixii uu rabay uu ka waayo halkaasi.”
Previous articleWasiir Xaaji oo tababar u soo xiray Shaqaalaha Wasaaradda Gaashaandhigga
Next articleIlaalada Xeebaha Puntland oo gacanta ku dhigay markab kalluumeysi (SAWIRRO)